အဲလျဆာလိင်ဂိမ်းအေးခဲကနေနာမည်ကြီးဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူရုံညစ်ညမ်းဂိမ်းထက်ပိုပါတယ်။ သူ႔အေမနဲ႔ သူ႔အေမလည္းပါတယ္။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ရုံအေးခဲလိင်ဂိမ်းထက်ပိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအများဆုံးကစားဂိမ်းရဲ့ကြောင့်ဆိုက်ကိုခေါ်ပါ။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာရွိခဲ့တဲ့ပထမဆံုးဂိမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အားလုံးကစားသမားရုပ်ပြောင်ဂိမ်း၏ဤကြင်နာများအတွက်အရူးဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်တစ်ချိန်က,ကျနော်တို့စာကြည့်တိုက်အတွက်တူညီတဲ့နယ်ပယ်မှအခြားခေါင်းစဉ်အများကြီးပါဝင်သည်နှင့်ယခုကြှနျုပျတို့ဝဘ်ပေါ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်ကိုအကောင်းဆုံးကာတွန်း,ကာတွန်းနှင့်လိင်ဂိမ်းကစားဆိုက်တစ်ခုရှိသည်။, အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်စေခြင်းငှါအရာအားလုံးရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိမ်ကာတွန်းစိတ်ကူးယဉ်စိတ်တော်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာ။ ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်တောင်ပိုပြီးဂိမ်းတွေကိုဆောင်ထားပါ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာဇာတ်ကောင်လာမယ့်နေကြသည်ရှိရာကနေမူရင်းစီးရီး၏စတိုင်အတွက်ကြောင့်အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်အထင်ကြီးလိမ့်မည်။
ဤသည်ရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဂိမ်းသည်သင်၏ငယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟုအချို့သောဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်ပြီးခေါင်းစဉ်အချို့တွင်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့သည်ညစ်ပတ်ပြီးလူအချို့ကထိုးစစ်ကိုရှာဖွေသည်။ သငျသညျလိမ်လိင်စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတျလြှငျ,သင်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာကိုချွတ်နေဖို့. ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤဆိုဒ်ကိုပိတ်ပစ်သို့မဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှအဘို့ဂိမ်းများကိုဖျက်ပစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပေးရှိသည်ချင်တယ်။ သို့သော်သင်သည်ညစ်ပတ်သောကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါကဤသူသည်သင်တို့အတွက်လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားတော်တော်အကြီးအကျယ်ကြောင်းစာကြည့်တိုက်အသစ်ဂိမ်းထည့်သွင်းစောင့်ရှောက်လော့။, ထိုအခါငါတို့သည်ဤအရပ်၌နေထိုင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စေမည်အချို့သောအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ဆိုက်အပေါငျးတို့သအခြားကစားသမားများနှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ကြောင်းအသိုင်းအဝိုင်းကိရိယာများရှိသည်။ ဖိုရမ်ချည်အတွက်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ပို့စ်,သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းနှုန်းဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ရှိသည်။
အဲလျဆာလိင်ဂိမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်းတစ်ခုဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊သို့သော်လူကြိုက်များသော ၀ ယ်လိုအားသည်အလားတူလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်စုဆောင်းမှုတွင်ဂိမ်းအသစ်များထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကစားရကျိုးနပ်ခဲ့ကြသမျှသောအေးခဲညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုရှာဖွေကစတင်ခဲ့သည်။ ဆာလာနဲ့ပိုချက်တီနိုတို့တောင်အန်ဖီးမှာကြက်တောင်ရိုက်တဲ့ကြက်တောင်ရိုက်သမားအဖြစ်ကစားကြမှာလိင်အသားပေးတွေတွေ့နေရပါတယ်။ ထို့နောက်သင်သည်ဆာ၊မြည်းနှင့်ဆာ၊အန်နာနှင့်ပင်သူတို့၏မီနာအမေအကြားအစာစားခြင်း၊သိုင်းကြိုးများဖြင့်စွန့်စားခန်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်လိင်တူချစ်သူမဖွယ်မရာဂိမ်းအချို့ကိုသင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပြီးအိုဇေးလ်ဟာလုပ်ဆောင်ချက်တချို့ရရှိနေတဲ့ဂိမ်းတွေကိုတောင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဲဒီမှာရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားသူတို့ကာတွန်းသားငယ်များအတွက်ရှိစေခြင်းငှါများစွာသောအခြားစိတ်ကူးယဉ်ကျေးဇူးပြုပြီးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်ချင်တယ်။ အဆိုပါစကြဝဠာကျွန်တော်တို့ကိုပင်ပိုမိုညစ်ပတ်လိင်ဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မိသားစုတစ်စုလုံးသည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဇတ်လမ်းထဲကဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့နဲ့လိင်ဂိမ်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ နောက်တောင်ထပ်သွားသေးတယ်။ ဒစ္စနေးမင်းသမီးအားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ငြိတွယ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့တောင်မှကာတွန်းကွန်ရက်ကနေပူနှင့်အတူလိင်ဂိမ်းများ,ကင်မ်ဖြစ်နိုင်နှင့်ဂျိုလီအပါအဝင်. သငျသညျသုံးပါး၏သားငယ်များအတွက်လုံးဝသူလျှိုကြိုက်တယ်လျှင်,သင်တို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းထဲမှာသူတို့ကိုအားလုံးလိုက်နိုင်., ဒီလိုမိသားစုလေးအဖြစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ရေကူးကာတွန်းတွေထဲကမီနီဘတ်စကတ်ဘောသမားတွေထဲမှာတော့ကိုမာနဲ့အမေရိကန်ဖေဖေတို့ဟာတစ်ခုခုဆိုမငြိုငြင်တတ်ကြပါဘူး။ ကျနော်တို့သင်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်း၌ပုံအပေါငျးတို့သညစ်ပတ်စိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်။ ပုံမှန်ထက်ပိုထည့်တယ်။ အရှက်ကွဲခြင်းအကြောင်းကိုမေ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင်၏ညစ်ပတ်သောလိင်စိတ်အတွက်အကန့်အသတ်မရှိစွန့်စားမှုများကိုခံစားပါ။
ကျနော်တို့ကြောက်မက်ဘွယ်အသစ်ဂိမ်းတွေနဲ့လာမသာတဲ့ဆိုက်ရှိသည်,ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးသောလမ်းအတွက်အခမဲ့အဘို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပေးထားပါတယ်။ သင်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ညစ်ညမ်း၏ဝမ်းမြောက်ဘို့ဆပ်ဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ငွေနှင့်မသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့်အတူသို့မဟုတ်ကြော်ငြာတွေပြီးနောက်ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်သုံးစွဲသင့်ရဲ့အချိန်နှင့်အတူ။ ကျနော်တို့ကစုံတွဲတစ်တွဲ၏နဖူးစည်းစာတမ်းတွေထားရန်အမှုအရာကိုသွားနှင့်ရှိသမျှသောင့်။ ဒါပေမယ့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ကဒီဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ခံစားမှု၏လမ်း၌ရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာအရာအားလုံးတရားမျှတပြီးကစားသမားအားလုံးအတွက်ပွင့်လင်းတယ်၊သူတို့ဘယ်မှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတိုင်းကအသက် ၁၈ နှစ်ကျော်။